MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 921
>Maung Maung One - The Irrawaddy
>ူမန်မာအကဵဉ်းသားမဵား မလေးရြားထောင်ကိုမီးရြိႚအေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာန ဧ္ဘပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းရြိူမန်မာူပည်သားမဵားကို စောင့်ုကည့်နေသော လုံ္ဘခြံရေးတပ်ဖြဲႚ၀င်မဵား (ဓာတ်ပုံ-ရိုက်တာသတင်းဌာန) မလေးရြာိးုိံင်ငံ၊ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတစ်ခုတငြ် အကဵဉ်းကဵနေသောူမန်မာူပည်သား အနည်းဆုံး ၆၀ ခန်ႚသည် တတိယိုိံင်ငံတင်ြသြားရောက်ခိုလြံရန်...
> www.shanland.org မြာ ဖော်ူပထားတဲ့ ကာတနြ်းဟန်လေးရဲႚ လက်ရာ No tags for this post. Related posts No related posts.
>မိုးမခူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ – ဧူပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈
>ူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာမိုးမခ (ရန်ကုန်)ဧူပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ်ခဵပ်ြအုန်ူးမင့် နဲ့အိံ္ဋိယခရီးစဉ်ပဵဉ်းမနားနယ်မြာ ဟောင်ဝဇ်ဇာအေူမာက် ပစ်ခတ်စမ်းသပ်ဆန်အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ပပြေၝက်တိုးတဲ့ အောင်သက်မန်းနဲ့အဖြဲ့ Blue မြ...
> ဖက်ဆစ်အလိုကျ ဆိုကြ ကကြတဲ့ နှလုံးသားမရှိတဲ့ အနုပညာရှင်များမိုးမခ ၀င်းဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ မဲဆွယ်ပြီး ထောက်ခံခိုင်းနေတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းစာတွေကနေ လွှင့်ထုတ်နေကြတဲ့ အဆိုတော်တွေ သီချင်းရေးသူတွေ စာရေးဆရာတွေမှာ ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာ...
>၀င်းပေၞမောင် – ဒိုင်အာခီ လက်သစ်မဵား
> ကြက်ကြောက်အိတ်ထဲက ဒိုင်အာခီလက်သစ်များဝင်းပေါ်မောင်ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးတွင် အရေးကြီးသော အချိုးအကွေ့တခုသို့ ရောက်လေတိုင်း အာဏာနောက်မြီးဆွဲသမားတို့ တစခန်း ထထလာတတ်ပြီး၊ နောက်ဆုံး၌ ၄င်းတို့သည် ပြည်သူလူထု၏ ဒဏ်ခတ်ခံရကာ ဇာတ်သိမ်းသွားရစမြဲ ဖြစ်သည်။ မေလ...
> ရန်ကုန်တငြ် အသေးစားပေၝက်ကဲမြူဖစ်ပြားဆင်ဟြာသတင်းဌာန၊ ရန်ကုန်က ပေးစာမဵားဧ္ဘပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ယနေႚညဦးပိုင်းက ရန်ကုန်္ဘမြိႚလယ်တငြ် ဗုံးပေၝက်ကဲမြတြစ်ခုဖစ်ပြားခဲ့ေုကာင်း၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မြဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရူခင်းမရိခြဲ့ေုကာင်း ရဲအရာရိမြဵားကေူပာုကားသည်။ ည ၈း၀၀ နာရီထိုးခၝနီးတငြ် ကေဵာက်တံတား္ဘမြိႚနယ်ရြိ...
> ရန်ကုန်တငြ် အသေးစားပေၝက်ကဲမြူဖစ်ပြားဆင်ဟြာသတင်းဌာနဧ္ဘပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ယနေႚညဦးပိုင်းက ရန်ကုန်္ဘမြိႚလယ်တငြ် ဗုံးပေၝက်ကဲမြတြစ်ခုဖစ်ပြားခဲ့ေုကာင်း၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မြဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရူခင်းမရိခြဲ့ေုကာင်း ရဲအရာရိမြဵားကေူပာုကားသည်။ည ၈း၀၀ နာရီထိုးခၝနီးတငြ် ကေဵာက်တံတား္ဘမြိႚနယ်ရြိ ၃၆ လမ်းအတငြ်း၊ ရန်ကုန်္ဘမြိႚတော်ခန်းမိံငြ့်...
>Chinese Security not necessary in Japan at China Olympic Torch Tour
> တရုတ်အိုလံပစ် မီးရှူးတိုင် ဂျပန်မှာ တရုတ်လုံခြုံရေးမလိုဟု ပြော မိုးသောက်ကြယ် (JAPAN TODAY NEWS) ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ တရုတ်အိုလံပစ်မီးရှူးတိုင်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ တရုတ်အစိုးရမှ လက်ရွေးစင်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ တရုတ်လုံခြုံရေးသမားများကို...
>မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ – April 20th 2008
> မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ ဧူပီ ၂၀ ၊ ၂၀၀၈၅ိံစ်ြသား မိုးမခ – မောင်ရစ်သတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသိာိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသားဟောင်း ဒေၞခင်မာအေး ကယ်ြလနြ်ူခင်း – မိုးမခဗိုလ်မြးအောင်လင်းထဋြ် တင်ူပခဵက်အကယ်ဒမီ စိန်မတ္ဇား...
>လမြနြ် မုံရြာ –ေုကာက်နေလိုႚတော့ မူဖစ်ဘူး
> ကြောက်နေလို့တော့ မဖြစ်ဘူးလှမွန်(မုံရွာ)ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ကြောက်နေလို့ တော့ မဖြစ်ဘူး။ အသက်ရှင်ရကျိုးနပ်မယ့် ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်အောင်သေချင်သေဆိုပြီး ကြိုးစားရမှာဘဲ ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) No tags for this post. Related...
> အားလုံးကိုလွှတ် ပိုစတာမိုးမခဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Cartoon – Generals say No to ‘No’ vote
> www.shanland.org တငြ် ဖော်ူပထားသော ကာတနြ်းဟန်လေး၏ လက်ရာ No tags for this post. Related posts No related posts.
>ိုိံင်ငံရေးသမားမဵားကို အုပ်စုဖြဲႚရိုက်ိံက်ြမမြဵား အဆက်မူပတ်ူဖစ်ပြားဓာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဧ္ဘပီ၁၆ ရက်နေပိုင်းက ႟ိုက်ိံက်ြခံခဲ့ရသူဖင့် ညာဘက်လက်ူပင်တငြ် ဒဏ်ရာရရိခြဲ့သော ကိုသီဟန်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒဂုံ္ဘမြိႚသစ် တောင်ပိုင်း္ဘမြိႚနယ်၊ အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵပြ် လူငယ်လုပ်ငန်းအဖြဲႚ တာဝန်ခံ။ “ဘင်ကားအူဖရြောင်က...
> ကရင်သတင်းစဉ် – ကောက်ိုံတ်ခဵက်မဵားကောသဘလေးကောလိပ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူငယ်မဵားကို ဦးစားပေးမည်တတိယနိုင်ငံအစီအစဉ်ေုကာင့် ပညာရေးဝန်ထမ်းသစ်မဵား ထပ်မံမြေးထုတ်နေရကရင်သတင်းစဉ် (KIC)ဧူပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ကောသဘလေး ကောလိပ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလူငယ်မဵားကို ဦးစားပေးမည် ကရင်သတင်းစဉ် (KIC) ကော်သဘလေး ကောလိပ်ကေဵာင်းဆင်းသည့် မဵြိးဆက်သစ်လူငယ်မောင်မယ်မဵား...
>မောင်စမြ်းရည် – ဦးဝင်းတင် အမတ်ြရသမ္တွ
> ဦးဝင်းတင် အမှတ်ရသမျှမောင်စွမ်းရည်ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဦးဝင်းတင်ကို ကျနော် စတင်သိကျွမ်းခဲ့ရတာကတော့ ကြေးမုံသတင်းစာ အယ်ဒီတာတယောက်အနေနဲ့ပါ။ ကြေးမုံသတင်းစာကို အောင် ဗလခေါ် ဦးသောင်းက စတင်တည်ထောင်လိုက်ပြီး ဇ၀န၊ စိန်ခင်မောင်ရီ၊ ဦးဝင်းတင်တို့ ၀ိုင်းဝန်းအားထုတ်မှုကြောင့်...
>Cartoon – Mr September – Live and let the junta die
> Cartoon – Mr September – Live and let the junta dieApril 18th 2008 No tags for this post....
>သာဂီ – ရန်ကုန်အိပ်မက်နဲႚ စကားေူပာူခင်း
> ရန်ကုန်က အိပ်မက်များနဲ့ စကားပြောခြင်းသာဂိ်ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သာဂိ – ဟယ်လို၊ ဟယ်လို၊ အသံဘယ်လောက်ကြားသလဲဗျ။ ရန်ကုန်အိပ်မက် – ကြားရတယ်။ အသံတယ်ကြည်ပါကလား။ သင်္ကြန်တွင်းမှာ ရေတွေ၊မီးတွေ၊ ဖုန်းတွေ အကုန်လာတယ်ဗျာ။...
> ၁၃၇၀ သင်္ကြန် ကဗျာမာမာအေးဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ သင်္ကြန်ရေအေးမျက်ရည်ပေးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်သိကြားမင်း … (၁၉၇၅ သင်္ကြန်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာပါ။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်အတွက် အမှတ်တရ ပြန်ရွတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်) No tags for this...
>လူထုဒေၞအမာ ၉၃ိံစြ် – အမတ်ြတရစကား
> လူထုဒေၞအမာ ၉၃ိံစြ် – အမတ်ြတရစကားမိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား အထူးအစီအစဉ်(မောင်စမြ်းရည် နဲႚ ဦးပန်တဵာ)ဧူပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ (အသံနားဆင်ရန် ရုပ်ပုံကြိုိံပ်ပၝ) No tags for this...
>မောင်စမြ်းရည် – မုံရြာတင်ရြေ
> ဒို့ သူငယ်ချင်း၊ ဒို့ ခေါင်းဆောင် မုံရွာတင်ရွှေမောင်စွမ်းရည်ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ မုံရွာတင်ရွှေဆိုတာ အများပေးတဲ့ကလောင်နာမည်ပါ။ ကျနော်တို့က အမည်ရင်းအတိုင်း ‘ကိုတင်ရွှေ‘လို့ဘဲခေါ်ပါတယ်။ သူကလဲကျနော့်ကို နာမည်ရင်းအတိုင်း ‘ကိုဝင်းဖေ‘လို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ သူကမုံရွာကဆိုပေမယ့် ကျနော်မန်းတက္ကသိုလ်ကိုရောက်တဲ့နှစ်မှာ...
Page 921 of 943«1...919920921922923...943»